The Predator ~ Nge Naing
ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ခံစားမှုများ စုစည်းရာ
လှိုက်လှဲစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်က ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု၊ အတွေ့အကြုံ၊ ခံစားမှုအတွေးအမြင်၊ ဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာရေးပညာပေး စတာတွေကို ကျွန်မ ရေးတတ်သလို ရေးပြီး အများသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေရင်းနဲ့ မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားရာ နေရာတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆိုက်တွေက နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ပို့စ်တချို့ကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြထားတဲ့ပို့စ် အနည်းငယ်လည်း ရှိပါတယ်။ C-Box ဘေးမှာ ကပ်လျှက် ဆိုက်ဘားမှာ ကဏ္ဍအလိုက် Labels တွေ ခွဲထားတဲ့အထဲမှာလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်။ လာလည်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။
(အောက်က မေတ္တာပို့သီချင်းနဲ့ စာသား ပါဠိ၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာ လေ့လာချင်သူများအတွက် ပို့စ်ကိုဒီနေရာမှာ Click ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Tuesday, August 11, 2009 Nge Naing6comments
Clinical နဲ့ Assignment တွေပေါင်းပြီး စာတွေ အလုပ်တွေ ပိနေလို့ ပို့စ်မတင်နိုင် ဘလော့ဂ်မလည်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သားသားက အိမ်စာ လုပ်ရာကနေ ငြီးငွေ့လာလို့ဆိုပြီး အမေရင်ခွင်ထဲမှာ ခဏလာထိုင်ကာ စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်ရေးချပြီး မေ့မေ့ဘလော့ဂ်ထဲမှာ သိမ်းထားပေးပါဆိုလို့ ထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ အခုလောလောဆယ် ဘယ်မှ လိုက်လည်ဖို့ အချိန်မရလောက်အောင် မအားပဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်ပေမယ့် လာလည်တဲ့သူတွေ ရှိနေတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်မလည်ဖြစ်တာကို သိပ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ လာလည်သူ အားလုံးကို သိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(Higher Degree Of Difficulty!)
When the moon rise
Soon I strike
I saw an evil knight
He had some might
My pants went tight
There was onlyadim of light
When it was only night
There was another good knight
And they hadafood fight
I was jumbled
But then I mumbled
YOU DID THE RHYME YOU DID THE CRIME!
(By Nge Naing son INDEPENDTLY )
If you want to talk to me email montynaing@gmail.com but don't type Burmese I'm still learning.
Posted in: ကဗျာ,ခံစားမှု,ဓါတ်ပုံ,သားသား
August 11, 2009 at 10:46 PM Reply
keep it up Dear!
August 11, 2009 at 11:57 PM Reply
August 11, 2009 at 11:59 PM Reply
Wow... Whatagood poem...!!!
August 12, 2009 at 12:49 AM Reply
August 19, 2009 at 5:06 AM Reply
Nyi Linn Thit says:
August 20, 2009 at 6:25 AM Reply
Wow...that's pretty good. Good job and keep it up...! I did like it.
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဓမ္မစင်္ကြာ တရားဦးကို ဟောကြားနေစဉ်
ဓမ္မစင်္ကြာ တရားက မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ သာသနာတော်မှာ ပထမဦးဆုံး ဘုရား ဟောကြားတော်မူတဲ့ တရားတော် ဖြစ်ပြီး တရား ဒေသနာတော် အားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသစ္စာ လေးပါး တရား ရေအေး တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဘလော့ဂ်ကို လာလည်သူများ အားလုံး နှလုံး စိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းပြီး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။
အမိ မြန်မာပြည်အား တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာ တိုးတက်စေချင်ပါသည်။ အဓမ္မကို အောင်နိုင်သည့် လက်နက်မှာ ဓမ္မသာလျင် ဖြစ်သည်ဟူသည့် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို လုံးဝ ယုံကြည် လက်ခံသောကြောင့် အဓမ္မဟူသမျှကို ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး သုံးပါးစလုံးဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။ ကျွန်မဘလော့ကို လာလည်သူအပေါင်း ဆူကြုံနိမ့်မြင့်၊ ယုတ်လတ်မြတ် မခွဲခြားပဲ ချစ်သူ မုန်းသူ မရွေး ဘေး၊ ရန်၊ ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကာ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းပြီး ကျန်းမာရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ သဗ္ဗေ သတ္တာ အ၀ရာ ဟောန္တု၊ အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု၊ အနီဃာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု။
C-Box - ယဉ်ကျေးစွာ ရေးသားပေးပါရန်
C-Box က ဖတ်စေချင်တဲ့ Link ချန်ထားပေဘို့နဲ့ နှုတ်ဆက်ဘို့သာ ဖြစ်လို့ ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို ဒီမှာမရေးဘဲ ပို့စ်အောက်က Comment မှာပဲ ရေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မနာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်တကာမှာ ပေါက်ကရတွေ လိုက်ရေးနေသူတွေ ရှိလို့
အာဏာရှင်အတွက် ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ကျွန်မ ဘာမှတ်ချက်မှမရေးကြောင်း လာလည်သူများကို အသိပေးပါရစေ။ မှတ်ချက်ကို မိတ်ဆွေ ဘလော့၈်တွေမှာပဲ ကျွန်မရေးတတ်ပြီး C-Box မှာရေးရင် နှုတ်ဆက်တာထက် ပိုမရေးတတ်သလို Comment နေရာမှာ ရေးရင်လည်း ကျွန်မရဲ့ google account နဲ့သာ log in လုပ်ပြီး ရေးတဲ့အတွက် မှတ်ချက်မှာ ဘလော့ဂါအမှတ်အသား (B) နဲ့ ကျွန်မရဲ့ Profile ဓာတ်ပုံ အမြဲတမ်း ပေါ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒေါ်လာစားဆိုသူရဲ့ဘလော့ဂ် Myanmar Express အပါအ၀င် တခြား အာဏာရှင် ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ဘလော့ဂ်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ Profile ဓာတ်ပုံ မပါတဲ့ Comment တွေနဲ့ C-Box က Nge Naing တွေအားလုံးက ကျွန်မ မဟုတ် ဒေါ်လာစားကိုယ်တိုင်နဲ့ တခြား Nge Naing အတုတွေသာ ဖြစ်ကြာင်း အဲဒီဆိုက်တွေက ရောက်လာသူ မိတ်ဆွေ အားလုံးကို အသိပေးပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိလို့ ဘယ်သူမဆို အဆင့်အတန်းရှိရှိ ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်က မှတ်ချက်တွေမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ယုတ်ရိုင်းစွာ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းတွေ ပါတဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို လုံးဝလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘဲ လာရေးရင် ဖျက်မှာ ဖြစ်ပြီး လွန်ကဲလာပါက IP ကိုပါ ပိတ်ပစ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အာဏာရှင်အားပေးတွေကို ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါတယ်။
C-Box မှာ လာစော်ကားခံရတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ကျွန်မသဘောထားကို ဒီနေရာမှာ (Click လိုက်ပါ) ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အိပ်ရာဝင် သားချော့တေး
လက်ရှိစာဖတ်နေသူ ဦး လိုင်းပေါ်မှာ .......
သွားလည်ဖြစ်သော ဓမ္မနှင့် သံဃာတော် ဘလော့ဂ်များ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း (ဆွိဒင်)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သီချင်းနဲ့ သမိုင်းအကျဉ်း
ဆိုနေသူများကတော့ မာမာအေးနဲ့ အဆိုတော်မဟုတ်သော ဆစ်ဒနီရောက် အဆိုဝါသနာအိုးများ ဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်း တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Popular Posts ( အဖတ်များဆုံး ပို့စ် ၁၀ ခု)
သားပေးတဲ့ မိခင်မျာျးနေ့ လက်ဆောင်
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စကားပြောသော ဗွီဒီယိုတခု
မြန်မာပြည်မှ အနုပညာ ပါရမီရှင်လေးတဦး
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ခံစားသိမြင်နိုင်ပါစေ
တခါက ကျွန်မရဲ့ ဇာတ်လိုက်
ရခိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာ စတင်အမည်တွင်လာပုံ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သမီးမိန်းကလေး လိုချင်ရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားရမလား?
1-1-1996 AND 1-1-2012 (၁၆ နှစ်မြောက် အမှတ်တရ)
၁၉၈၈ က ၄င်းကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း တဦးက ၀န်ခံလိုက်ခြင်း
ရုရှားရောက် ပညာတော်သင်များရဲ့ အတုယူသင့်သော ဆိုက်များနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အတုမယူသင့်သော လုပ်ရပ်များ
Visitor Countrys 2
ရေးခဲ့ပြီးသောPost နှင့်Comment များ
ရေးခဲ့ပြီးသော Post နှင့် Comment များ
Labels ကဏ္ဍအလိုက် ကြိုက်ရာ ရွေးဖတ်ပါ
ABSDF တောတွင်းဘ၀ပုံရိပ် (49)
ABSDF မြောက်ပိုင်းပြဿနာ (19)
Australian society and environment (22)
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) (4)
Genetics (မျိုးရိုးဗီဇ အကြောင်း) (6)
Nursing (သူနာပြု) (6)
Nutrition (အာဟာရ) (6)
မြ၀တီ ရဲခေါင် (11)
သွားလည်ဖြစ်သော သတင်း/နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်များ
မြန်မာအလံနဲ့ အောင်ပွဲခံတဲ့ ယူကေက သိုင်းပေါင်းစုံ ကစားသမား - မြန်မာ့စပါးအုံး နီကိုလာ
Democratic Party foraNew Society - Official Website (Burmese Version)
“မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်စည်ပင်ရေး အမျိုးသမီးလုပ်အားဖြင့် ကူညီပေး”ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်
ဧရာဝတီ မိတ်ဆွေများ | သဘာဝအရင်းမြစ်များကိုကာကွယ်ကြပါစို့..
3kg capacity gem polishing machine vibratory tumbler abrasive rock
၆၇နှစ်ပြည့် ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့သို့ KNUအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် တက်ရောက်ခဲ့(မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ)
မေ့လျောနေခဲ့သော အာရှတိုက်၏ သူရဲကောင်း ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော အမေရိကားရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ
Aung San Suu Kyi International Network
MoeMaKa News Synd
Cash Advance | Debt Consolidation | Insurance | Free Credit Report at Humanright-Myanmar.com
သွားလည်ဖြစ်သော သုတရသ/အထွေထွေ ဘလော့ဂ်များ My Blog List
Burmese Community Broadcasting Group(Sydney)
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နှစ်ဦးဆုတောင်း
"စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူတယောက် မြန်မာသမ္မတ ဖြစ်လာလေမလား"
Ko Min Din
♫♥✿* ကြိုးမဲ့စွန် ♫♥✿*
ကျနော်လှန်လှောကြည့်မိသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ ၅
ခေါင်းကိုက်နေသူများ အတွက် ဆေးမြီးတိုမျ
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်ဝတဲ့ မြန်မာအတာကူး ဖြစ်ကြပါစေ
၀င်းဦး - ကမ်းဦးသို့ ပြန်လာပါ
Blog Archive Jul 2016 (1) Jun 2016 (1) May 2016 (2) Nov 2015 (1) Jun 2015 (4) May 2015 (3) Oct 2014 (4) May 2014 (2) Aug 2013 (1) Jul 2013 (5) Jun 2013 (1) May 2013 (1) Apr 2013 (3) Mar 2013 (4) Feb 2013 (11) Jan 2013 (3) Dec 2012 (1) Nov 2012 (3) Oct 2012 (2) Sep 2012 (8) Aug 2012 (2) Jul 2012 (4) Jun 2012 (4) May 2012 (1) Apr 2012 (10) Mar 2012 (9) Feb 2012 (5) Jan 2012 (6) Dec 2011 (8) Nov 2011 (1) Oct 2011 (2) Sep 2011 (7) Aug 2011 (5) Jul 2011 (10) Jun 2011 (7) May 2011 (9) Apr 2011 (5) Mar 2011 (6) Feb 2011 (3) Jan 2011 (6) Dec 2010 (7) Nov 2010 (15) Oct 2010 (9) Sep 2010 (8) Aug 2010 (5) Jul 2010 (14) Jun 2010 (9) May 2010 (14) Apr 2010 (9) Mar 2010 (6) Feb 2010 (14) Jan 2010 (8) Dec 2009 (8) Nov 2009 (6) Oct 2009 (14) Sep 2009 (10) Aug 2009 (23) Jul 2009 (8)
သင်၏ ကွန်ပြူတာ IP နှင့် အချက်အလက်
Copyright © 2011 Nge Naing